Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ E Bipụtara Ka Ọ Ghara Imebi Ngwa Ngwa
NDỊÀMÀ JEHOVA ji Baịbụl kpọrọ ihe karịa akwụkwọ ọ bụla ọzọ. Anyị na-amụ ya mgbe niile ma jiri ya na-ezi ndị mmadụ ozi ọma Alaeze Chineke. (Mat. 24:14) Ọ bụ ya mere ụmụnna anyị ji gbasie mbọ ike ka ha jiri ihe ndị mara mma na ndị na-agaghị emebi ngwa ngwa mee Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ nke Bekee e bipụtara n’afọ 2013.
Mgbe ụmụnna anyị na-arụ ọrụ n’ebe a na-ebi akwụkwọ na Wọlkil, Niu Yọk, nke dị n’Amerịka, gara n’ọfis otu onyeisi ụlọ ọrụ na-ekwe akwụkwọ ka ha na ya kparịta otú Baịbụl ọhụrụ a ga-adị, nwoke ahụ sịrị ha: “O nweghị onye ga-emepụtali ụdị Baịbụl a unu chọrọ. Ọ dị mwute na ọtụtụ Baịbụl a na-emepụta taa na-ama mma n’anya ma e dosa ha n’ọ́bá akwụkwọ, ma a naghị eme ha ka ha ghara imebi ngwa ngwa.”
Ụfọdụ Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ ndị e bipụtaburu anọteghị aka tupu ha emebie. Ọ bụ ya mere ụmụnna anyị ndị na-ebi akwụkwọ na Wọlkil ji kpachara anya na-achọ ụdị mkpo akwụkwọ na mgbá a ga-eji ekwe Baịbụl ọhụrụ a otú ọ na-agaghị emebi ngwa ngwa n’agbanyeghị ebe e ji ya gaa n’ụwa. Ihe ndị ha chọpụtara mere ka ha mepụta Baịbụl ole na ole ma zigara ha ụmụnna anyị ndị bi ná mba dị iche iche n’ụwa, ma n’ebe a na-enwe oké okpomọkụ ma n’ebe a na-enwe oké oyi.
Mgbe ọnwa isii gachara, e weghachiiri anyị Baịbụl ndị ahụ. Ụmụnna ndị ahụ na-ebi akwụkwọ lebara anya n’otú ha dịzi ma jiri ihe ha chọpụtara mepụta ndị nke ka mma ma zighachiri ha ụmụnna anyị. Baịbụl niile e zipụụrụ ụmụnna anyị ka e jiri ha chọpụta otú kacha mma a ga-esi kwee Baịbụl anyị dị otu puku na narị isii na iri itoolu. Ọ dabara na ole na ole n’ime ha mebiri nke ukwuu, ma a kpachaghị anya mebie ha. Dị ka ihe atụ, ụgbọala rịrị otu n’ime ha elu, mmiri mara otu n’ime ha chi abọọ, e nwekwara nke idei mmiri buuru mgbe e nwere ajọ ifufe na oké mmiri ozuzo.
N’afọ 2011, n’oge a na-eweghachichabeghị Baịbụl ndị ahụ, Òtù Na-achị Isi zụtara ọkpọka ígwè abụọ na-ekwe akwụkwọ ngwa ngwa. E dowere otu na Wọlkil, dowe nke ọzọ n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Ebina, Japan. Ihe bụ́ mkpa anyị n’oge ahụ abụghị naanị ibipụta Baịbụl niile ga-ezuru ụmụnna anyị, kama anyị chọkwara ịhụ na e nweghị ọdịiche ga-adị na Baịbụl ndị e biri na Wọlkil na ndị nke e biri n’Ebina.
Mkpo Ya Na-afụkọta Afụkọta
Mkpo Baịbụl ndị mbụ a na-afụkọta afụkọta
Ná mbido afọ 2012, ebe abụọ ahụ a na-ebi akwụkwọ, ya bụ, na Wọlkil nakwa n’Ebina, malitere ibi Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke afọ 1984 ma jiri mkpo akwụkwọ ndị e mepụtara ọhụrụ na-ekwe ha. Ma, e bughị ụzọ zigara ụmụnna anyị Baịbụl ndị ahụ ka a mara otú ha ga-adị. A chọpụtaziri na mgbá e ji kwee mkpo Baịbụl ndị ahụ na ihe ọzọ e tinyere n’ime mkpo ha mere ka ha fụkọtawa afụkọta. N’ihi ya, a kwụsịrị ibipụta na ikwe Baịbụl ndị ahụ.
Ndị mepụtara otu n’ime ihe ndị e ji kwee mkpo Baịbụl ndị ahụ kwuru na nsogbu mkpo akwụkwọ na-esighị ike na-enwe bụ na ọ na-afụkọtakarị afụkọta. Ha kwukwara na e nweghị ihe e nwere ike ime ka ọ kwụsị ime otú ahụ. Ma kama ibidozi mewe mkpo Baịbụl ndị siri ike, ụmụnna anyị kpebisiri ike na ha ga-achọta otú ha ga-esi emepụta mkpo Baịbụl na-esighị ike, bụ́ ndị ga-ama mma ma ghara imebi ngwa ngwa. Mgbe ọ fọrọ obere ka o ruo ọnwa anọ ha nọ na-achọ ụdị mgbá kacha mma na ihe ọzọ kwesịrị ekwesị a ga-etinye n’ime mkpo Baịbụl ahụ, ha nwetara ndị nke dị mma, bụ́ ndị ga-eme ka mkpo Baịbụl ghara isi ike, ma n’otu mgbe ahụ ghara ịfụkọta afụkọta. Ọ bụ mgbe ahụ ka ha bidoghachiri ibipụta na ikwe Baịbụl anyị.
Ebe a na-ekwe akwụkwọ na Wọlkil
E mere ndokwa na a ga-ewepụtara ọhaneze Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ Bekee e degharịrị edegharị n’Ọktoba 5, 2013, ná nnọkọ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania na-enwe kwa afọ. Na Fraịdee, Ọgọst 9, 2013, ndị na-ebi akwụkwọ na Wọlkil nakwa n’Ebina si n’Ịntanet nweta Baịbụl a e degharịrị edegharị ma malite ibi ya n’echi ya. Ọ bụ n’Ọgọst 15, 2013 ka e bipụtara Baịbụl mbụ zuru ezu. Ụmụnna ndị na-ebi akwụkwọ na Wọlkil nakwa n’Ebina rụrụ ọrụ izu asaa ehihie na abalị nke mere ha ji nwee ike ibipụta na izipụ ihe karịrị otu nde Baịbụl na narị puku isii, bụ́ Baịbụl ole a tụrụ anya ga-ezu mmadụ niile ga-abịa nnọkọ ahụ otu otu.
Ọ bụ eziokwu na Baịbụl ọhụrụ a mara mma, ọ gaghịkwa emebi ngwa ngwa, ma ihe kacha mma na ya bụ na ihe e dere na ya ga-enye ndị mmadụ ndụ. Otu nwanna nwaanyị bi n’Amerịka so ná ndị natara Baịbụl a n’ụbọchị e kesara ya. N’echi ya, o dere, sị: “Ugbu a anyị nwetara Baịbụl ọhụrụ a, m na-aghọtazi Baịbụl karịa otú m na-aghọtabu ya.”
Baịbụl A Sụgharịrị n’Asụsụ Dị Iche Iche
Tupu Ọgọst 31, 2014, a sụgharịala Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ n’asụsụ otu narị na iri abụọ na anọ, ma ndị nke bụ́ naanị Akwụkwọ Nsọ Grik ma ndị nke bụ́ Akwụkwọ Nsọ Hibru na Grik. N’okpuru ebe a, e depụtara ndị nke e wepụtara n’afọ ije ozi nke 2014.
MGBE E WEPỤTARA YA
EBE E WEPỤTARA YA
NKE E WEPỤTARA
Akwụkwọ Nsọ Grik
Septemba 20, 2013
Jenụwarị 17, 2014
Julaị 5, 2014
Baịbụl Zuru Ezu
Ọgọst 8, 2014
Ọgọst 22, 2014
Ọgọst 29, 2014
Ndịàmà Jehova Hà Nwere Baịbụl nke Ha?
Ọ bụrụ na i jiri Baịbụl dị iche iche na-amụ ihe, ọ ga-abara gị ezigbo uru. O nwere ihe atọ dị mkpa mere Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ kwesịrị iji soro na Baịbụl ndị i ji amụ ihe.